Lalao Cross-Platform tsara indrindra amin'ny taona 2020 - Lalao
Lalao Cross-Platform tsara indrindra amin'ny taona 2020
Ny indostrian'ny lalao dia mitombo isan'andro ary tsy maintsy manova ny traikefa amin'ny lalao ao anatin'ny folo taona ho avy. Ny lalao toy ny PUBG, FORTNITE, CALL OF DUTY, sns, dia nahasarika ny sain'ny tanora ankehitriny. Ny mpilalao dia nahomby tamin'ny sehatry ny indostrian'ny lalao, noho ireo lalao malaza ireo.
Amin'ny maha-iray amin'ireo sehatra mivoatra sy mamaky tany ankehitriny, lafiny iray mendri-piderana amin'ny lalao maoderina ny endrika lalao cross-platform. Ny lalao cross-platform dia mora idirana amin'ny Internet amin'ny rafitra lalao hafa toy ny Xbox, PC, PS4, sns. Tsy lalao manokana ireo lalao ireo.
Afaka mihazakazaka amin'ny sehatra rehetra tsy misy fetra na fetra izany. Ireo lalao mitovy amin'izany dia azo lalaovina amin'ny sehatra samihafa.
Lisitry ny lalao Cross-Platform malaza:
Ny lalao cross-platform dia ahafahan'ny mpilalao milalao lalao amin'ny sehatra samihafa mora foana. Ankoatry ny haben'ny efijery an'ny fitaovana marobe dia tsy misy fahasamihafana firy amin'ny traikefa filalaovana.
Ohatra, raha misy olona milalao Call of Duty amin'ny PS4, dia afaka milalao lalao mitovy amin'ny olon-kafa manana sehatra hafa izy ireo.Ny lalao cross-platform dia nanjary nalaza be tao anatin'izay taona vitsy lasa izay satria io fampiasa io dia mamela ny fahaizan-javatra bebe kokoa ary manome safidy lalao maro.Ny sasany amin'ireo lalao miampita sehatra malaza dia misy:
Fitaovana ady 4
Halo ady 2
Azo ampiasaina amin'ny Modern Gaming ve ireo sehatra Cross?
Samy tia milalao isika rehetra isaky ny mankafy atiny maro. Mahafinaritra hatrany ny milalao lalao miaraka amin'ny namana sy fianakaviana. Mety ho sarotra ny miara-milalao rehefa manana milina hafa ny namanao akaiky indrindra. Manome anao olana an-taonina amin'ny lalao multiplayer koa izy io. Androany hiezaka izahay hamaly raha misy amin'ny lalao maoderina ny lalao Cross-Platform. Amin'ity torolàlana ity dia manana safidy an-taonina maro isika ao amin'ny tsena ankehitriny ho an'ny lalao. Misy mari-pahaizana tsy misy tomika ao amin'ireo lohateny farany. Andeha hojerentsika ny lalao miampita malaza sasany amin'ny taona 2020.
Izy io dia iray amin'ireo sehatra midadasika malaza indrindra amin'ny lalao. Xbox dia azo ampiasaina amin'ny filalaovana na iza na iza, na aiza na aiza, ary amin'ny fotoana rehetra, noho ny mifanentana amin'ny lalao an-tsehatra. Xbox dia atsinanana izao hampifandray amin'ny PS4, PC, Nintendo Switch, sns. Lalao vitsivitsy izay azo lalaovina amin'ny sehatra Xbox sy mifandray amin'ny PC dia ahitana:
Maty mitsangana 4
PC dia soloina solosaina manokana. Azo heverina fa i PC no sehatra lehibe indrindra hilalaovana lalao video izay mila soavaly matanjaka. Gaming PCs dia fitaovana malaza ahafahantsika mahatratra fampisehoana mety amin'ny lalao gameplay. PCs dia malaza be satria manana safidy lalao maro hafa izy ireo noho ny console lalao.
Ny lalao PC malaza sasany dia: -
Izy io dia konsolin'ny lalao ankapobe faha-4 an'ny andiana Play Station. Ity console ity dia mitovy amin'ny PC filalaovana nefa kely dia kely ny vidiny. Ny sasany amin'ireo lalao miampita PS4 malaza dia misy:
Mortal battle 11 farany
Tsy misy lanitra ny olona
PS5 dia fampiononana horonantsary an-trano izay manome ny lanjan'ny fampandrosoana any amin'ny Sony Interactive Environment. PS5 sy ny andian-dahatsoratra X no lalao manandanja indrindra amin'ny taona 2020. Anisan'ny lalao lehibe miampita sehatra amin'ny PS5 sy ny andiany X ny:
Fortnite:Izy io no lalao cross-platform lehibe indrindra azo alaina ho an'ny PS5 sy Xbox series X.
Chivalry 2:Ity lalao cross-platform ity dia mandeha tsara amin'ny sehatra lehibe rehetra toa ny PS5, PS4, Xbox, sns.
Marvel's Avengers:Izy io dia iray amin'ireo lalao goavambe malaza indrindra misy. Ny lalao dia mamela ny mpilalao PS4 sy PS5 hiara-milalao ary ny Xbox iray ary ny Xbox series X mpilalao hiara-milalao.
Mikorisa ny kankana:Ity dia lalao malaza izay tohanan'ny PS5, PS4, ary PC.
Fampitahana matetika indrindra: PS5 vs Xbox Series X - Iza amin'ireo Console Gaming no tsara indrindra?
Lalao cross-platform tsara indrindra izay tsy maintsy jeren'ny Gamer rehetra:
Tsy mahafinaritra ny lalao raha tsy misy namana. Ny taona 2020 dia mifandraika amin'ny fifandraisana, ary ankafizinay any an-trano izany. Ny gaming dia manolotra ny fomba fifandraisana mora indrindra eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Amin'ity fizarana ity dia hijerena ireo safidy multiplayer cross-platform malaza indrindra izahay. Ireo dia hanampy anao hilalao atiny tsy misy manahirana mora foana. Afaka manomboka mivezivezy amin'ny findainy ny mpampiasa. Hanampy izany raha manana fifandraisana Internet haingana ianao amin'ny traikefa tsara indrindra. Ireto misy lalao hazo fijaliana vitsivitsy izay tokony hojerenao.
Fortnite dia iray amin'ireo lalao video lalao ankafizina malaza misy ankehitriny.Manolotra traikefa filokana marobe sy milamina amin'ny Internet izy io. Epic Games no mpamorona ity lalao mahafinaritra ity. Ny fomba filalaovana telo hafa misy ao dia misy ny Party Royale, Save The World, ary Creative. Hita amin'ny tompona Xbox One, PS4, PC, androids, ary Nintendo Switch izao izy io.
2. Antson'ny adidy: Ady maoderina
Ireo dia roa amin'ireo lalao Call of Duty malaza indrindra: ny 'COD Modern Warfare' sy 'Warzone,' izay singa mpiady teo aloha. Ireto lalao video roa ireto dia malaza ihany koa satria manome fivoarana an-tsehatra eo amin'ireo lohateny voalaza etsy ambony. Manana fanohanana mavitrika amin'ny Xbox One, PS4, ary PC izy ireo.
Mouse COD tsara indrindra ho an'ny ady maoderina
SMITE dia malaza amin'ny lisitra toetrany. Manome fomba filokana maromaro izy io. Izy io dia azo lalaovina amin'ny Xbox One, PS4, PC, ary Nintendo Switch.
Minecraft no lalao boaty fasika malaza indrindra izay manome traikefa tokana. Izy io dia fampivoarana vaovao an'ny Mojang Studios ary azo lalaovina amin'ny Xbox One, PS4, PC (windows fotsiny), android, ary ny Nintendo Switch. I Microsoft no tompon'ity studio kilalao mahafinaritra ity ankehitriny.
Ny ligin'ny Rocket dia iray amin'ireo lalao mifaninana indrindra. Psyonix no mpamorona ny lalao manaitra nefa mahitsy.Malaza izy io noho ny lalao tsy manam-paharoa. Noho ny lazany goavambe, ny fanavaozana vaovao dia hanasongadinana ny fivoaran'ny sehatra sehatra eo amin'ny Xbox One, Nintendo Switch, PC, ary ny PS4.
Ireto dia vitsivitsy monja amin'ireo lalao hazo fijaliana izay afaka ankafizinao isan'andro amin'ny alàlan'ny traikefanao amin'ny lalao. Ny ligin'ny rocket dia hanova ny lalao baolina kitra ary hanampy anao hanana traikefa mampifandray mahafinaritra.
Famerana ny lalao Cross-Platform:
Ny vola madinika rehetra dia misy sisiny roa. Na dia nampiroborobo ny kolontsaina filalaovana aza ny lalao cross-platform, dia manana ny fetrany ihany izy ireo, toy ny:
1. Ny vidin'ny vidiny
Mandany vola be ny fandefasana ny lalao amin'ny rafitra samihafa ary alao antoka fa mandeha tsara izy io.
2. Coding & fampandrosoana
Ny fandaharana rindrambaiko amin'ny lalao cross-platform dia tsy mora. Izy ireo dia tsy maintsy apetraka amin'ny programa sy kaody amin'ny fomba hafa mba hihazakazahana am-pilaminana amin'ny sehatra maro. Noho io antony io dia orinasa maro no tsy miroso amin'ny fampandrosoana ny lalao cross-platform.
Ilaina ho an'ny rehetra ny lalao Cross-Platform amin'ny taona 2020. Miha-manakaiky isan'andro isan'andro mankany amin'ny fanitsakitsahana fetra vaovao isika. Hankafy traikefa gameplay mahafinaritra izahay amin'ny alàlan'ireto lalao ireto. Miezaka manome anay safidy maromaro eny an-tsena ny mpitari-dalana anay. Andramo izy ireo anio ary manaova fotoana mahafinaritra miaraka amin'ireo sakaiza kilalaoo amin'ny Internet.
Lalao 15 tsara indrindra toa an'i Roblox (2020)
Inona no haren'i Jimmy Kimmel? Fantaro ny toe-bolany
Untold Malice at The Palace: Documentary momba ny ady tsy mahazatra
mijery sarimihetsika vaovao hd an-tserasera
misintona sarimihetsika tsy ara-dalàna maimaim-poana
tranokala fandefasana televiziona sy sarimihetsika
mpiantso kaody adiresy
ahoana no hametrahako iTunes amin'ny PC
misintona bluestacks emulator android ho an'ny pc